Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny anaran'ireo minisitry ny fizahantany 35 UNWTO dia mikendry ny hitaona ny fifidianana
UNWTO: Azo atao ny manomboka indray ny fizahantany azo antoka
Ny minisitry ny fizahantany any amin'ireto firenena 35 ireto dia mbola nangina ihany. Nilaza ny minisitra iray eTurboNews tsy misy firaketana an-tsoratra: “Fa maninona no apetako aloha ny vozoko?” Ity karazana fisainana ity dia mety ho fanalahidin'ny fahombiazan'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO tsy mitandrina mba hitaomana ny valin'ny fifidianana tadiaviny.
Ity misy lisitr'ireo firenena 35. Ampahafantarina ny firenena rehetra izao ny momba an'io drafitra io, ary miandry ny valiny na ny hetsika.
Iran (Islamika Repoblika)
Noforonin'ny saina tompon'ny fisafotofotoana ara-politika
Tizy Tanànan'i Madrid dpejy iray tao amin'ny tranonkalany nampitandrina ireo mety ho mpitsidika tsy handeha amin'ity tanàna ity ary manisy lisitra ny fetra rehetra, ny curfews ary ny fanidiana tsy maintsy atao eo amin'ny toerany.
Ny tranonkala ofisialin'ny fizahantany any Espana www.spain.info tsy miraharaha COVID-19 tanteraka, fa ny Masoivohon'i Etazonia ao Madrid nandefa izao manaraka izao:
Noho ny fetra COVID-19 Espaniola dia tsy afaka miditra any Espana ny olom-pirenena amerikana raha tsy mahafeno fepetra takiana manokana na efa nahazo alalana manokana avy amin'ny Governemanta Espana. Ho fanampin'izany, ny olom-pirenena amerikana mandeha avy any Etazonia na firenena hafa dia mila mampiseho valin'ny fitsapana PCR ratsy nisesy tao anatin'ny 72 ora talohan'ny nahatongavany sy nameno ny taratasy fanaraha-maso ara-pahasalamana (Jereo ny takiana fidirana sy fivoahana etsy ambany).
Ny sekretera an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany UNWTO tany Madrid tamin'ny 8 Desambra dia nandefa torolàlana ho an'ny minisitry ny fizahantany any amin'ny firenena 35 mpikambana izay misolo tena ny komity mpanatanteraka. Ity komity ity dia kasaina hihaona any Madrid amin'ny 18 sy 19 janoary hifidy sekretera jeneraly vaovao. Zurab dia iray amin'ireo mpifaninana roa ary saika tsy afaka nahazo mpifaninana mihitsy. Ny mpifaninana tokana afaka tonga tamin'ny minitra farany dia Ramatoa Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa avy amin'ny fanjakan'i Bahrain. Na i Bahrain aza dia diso tsipelina tamin'ny fanamafisana ofisialy navoakan'ny UNWTO.
Firenena 6 natolotra ho kandidà. Noho ny tsy fahampian'ny fotoana sy ny tsy nampoizin'ireo hadisoana fohy nataon'ny mpitondra fivavahana dia nanala ny fanendrena olona 6.
Zurab Pololikashvili no atidoha nikotrika io fanodinkodinana io izay mety tsy fantatry ny sasany amin'ireo firenena 35 iharan'izany.
Nandritra ny 2 taona, ny sekretera jeneraly dia nikarakara izay nilain'ireo mpikambana 35 ireo ka nahatonga ny maro tamin'izy ireo tsy nifidy hanohitra azy. Misy ny adidy ara-toekarena, ny kaonferansa manan-danja, ny fampanantenna ho an'ny toerana manan-danja, ny olana nifampiraharahana tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny, ary ny latsa-bato, ary maro hafa miaraka amin'ity elit 35 ity.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili dia namitaka ireo mpikambana 35 ireo tamin'ny volana septambra tamin'ity taona ity mba hanaiky ny famindrana ny fifidianana UNWTO manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Janoary 2021. Ny sekretera jeneraly dia nilaza tao Georgia fa te-hanafoana ny dia tsy ilaina amin'ny minisitra mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka. Ny antony dia noho ny fandaharam-potoana FITUR - fampisehoana varotra minisitra izay manatrika tsy tapaka matetika any Madrid. Ity fampisehoana varotra ity dia nomanina tany Madrid ny 18-19 Janoary. Zurab dia efa nahafantatra ny fikasan'ny FITUR hanemotra azy.
Herinandro monja taty aoriana dia nahemotra tamin'ny Mey ny FITUR rehefa niditra anaty hidim-baravarana i Madrid. Nahatonga an'i Madrid tsy azo antoka amin'ny dia izy io. Raha tokony hamindra ny fivorian'ny fifidianana avy hatrany dia niverina tamin'ny fotoana nanatanterahana izany dia manery ny minisitra hidina fiaramanidina i Zurab izao ary ho any Madrid raha tsy amin'ny vato 18-19 Janoary. Fantany tsara fa tsy hitranga izany ary handresy izy amin'ity fifidianana ity.
Raha ny filazan'i Zoltan Somogyi, talen'ny Executive teo aloha tao amin'ny World Tourism Organization, dia mety ho ara-dalàna io tetika io, nefa tena tsy manaraka fomba.
Ahoana ny famelana ny minisitry ny Executive Executive hifidy amin'ny alàlan'ny elektronika?
Tao amin'ny taratasy iray tamin'ny 8 desambra lasa teo, dia notoroana hevitra ny Sekretariatin'ny UNWTO hilaza amin'ireo firenena fa tsy isaina ny vato elektronika.
Taratasy UNWTO ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny mpanatanterakaDownload
Ity ny ampahany mifandraika amin'ilay taratasy:
Mifanaraka amin'ny lalàna faha-29 amin'ny fitsipiky ny lamina sy ny lalàna efa ela ary ny lalàna mifehy ny fanendrena ho sekretera jeneraly namboarina eto ambany ny andininy faha-III etsy ambany, ny filankevitra dia hanao ny tolo-keviny amin'ny fivoriana manokana amin'ny latsa-bato miafina .
Ny fitsipiky ny fomban'ny filankevitra mpanatanteraka sy ny toro lalana momba ny fifidianana amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina (ampidirina amin'ny fitsipiky ny fomba fanao amin'ny fivorian'ny jeneraly), miaraka
ireo lalàna efa voalaza etsy ambony voalaza etsy ambony, dia namboarina tamin'ny fomba izay milaza fa manatrika ara-batana ny fivorian'ny mpikambana. Na izany aza, ao anatin'ny tontolon'izao tontolo izao izay misy ny fihaonambe ofisialin'ny filan-kevitry ny filankevitra iray ary misy ny fanakiviana manerantany, dia nanjary tsy maintsy jerena ireo fomba vonjimaika sy tsy manam-paharoa mba hahazoana antoka fa mila fanapahan-kevitra lehibe amin'ny fampandehanana tsara ny ny fikambanana.
Noho izany antony izany, ny mpikambana ao amin'ny Filankevitra dia nandray tamin'ny alalàn'ny fomba fanginana ny fanapaha-kevitra “Drafitra manokana mifehy ny filankevitra mpanatanteraka mandritra ny areti-mandringana COVID-19” 2 izay manondro manokana
fitsipika mifehy ny fitantanana ny fivoriana virtoaly sy mivantana an'ny filankevitra mandritra ny areti-mandringana COVID-19 ary manome alalana ny filohan'ny filankevitra, miaraka amin'ny fankatoavan'ny sekretera jeneraly, hanao fivoriana ao amin'ny filankevitra raha toa ka mitazona ny Ny fivoriana manokana dia tsy azo ampiharina noho ny areti-mandringana, ary ny fampahafantarana ny mpikambana rehetra izany fanapahan-kevitra izany folo andro mialoha ny fisokafan'ny fivoriana.
Ny teknolojia midika ho an'ny Secretariat izay misy amin'izao fotoana izao dia tsy mamela na izany aza, mitazona bileta miafina an-tserasera fa ho azy manokana. Raha ny marina, tsy nisy filan-kevi-pitantanana misy rafitra hafa an'ny rafitry ny Firenena Mikambana nanao vato miafina an-tserasera.
Vokatr'izany, na dia misy aza ny fivoriana hybrid (an-tserasera sy an-toerana) an'ny Filankevitra, amin'ny singa amin'ny tolo-kevitry ny olona voatendry amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly, ireo mpikambana izay manan-jo hifidy dia ho eo mandritra ny fifanakalozan-kevitra an'ny mpilatsaka hofidina ("fivoriana manokana mametra") sy mandritra ny latsa-bato miafina ("fivoriana tsy miankina mahazatra"). Noho izany antony izany, ny delegen'ny mpikambana ao amin'ny filankevitra mifidy dia tokony ahitana mpikambana iray farafahakeliny izay manatrika ara-batana mandritra ny fivoriana manokana ary omena fahefana manokana handatsa-bato.
Raha fintinina, ny solontenan'ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pifidianana izay manatrika ara-batana amin'ny fivoriana tsy miankina ("ny mpifidy"), na mpikambana ao amin'ny delegasionany manokana na mpikambana ao amin'ny délégation (proxy) hafa, dia tokony hahazo fankatoavana sy fahefana ara-dalàna. handatsa-bato amin'ny anarany.
Notsiahivin'ny Sekretera koa fa firenena mpikambana maro no nanendry ny masoivohon'izy ireo ho any amin'ny fanjakan'i Espana ho solontena maharitry ny fikambanana manana fahefana ampy hisolo tena azy ireo amin'ny fivorian'ny filan-kevi-pitantanana sy handatsa-bato ho azy ireo, mifanaraka amin'ny ny fampiharana ireo fikambanana hafa ao amin'ny rafitry ny Firenena Mikambana.
Raha misy ifandraisany amin'ny fanondroana ny mpanambara araka ny Fitsipika momba ny fitantanana ny fifidianana amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina, ny filohan'ny filankevitra dia manendry mpilaza roa (2) avy amin'ny mpikambana ao amin'ny filankevitra izay misy delegasiona misy mpisolo toerana ara-batana mihoatra ny iray. ao amin'ny Fivoriana.
Ary farany, mba hiantohana ny tsiambaratelo ilaina amin'ny fivoriana mifanaraka amin'ny lalàna, ny fandraisana anjara amin'ny Internet dia tsy hatao mandritra ny fivoriana tsy miankina voafetra, ary toy izany koa
voafetra ihany koa rehefa misy ny latsa-bato miafina.
Ny herinandro lasa teo dia nifandray daholo ny firenena amin'ny taratasy misokatra nataon'i Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Dr. Taleb Rifai, sy Francesco Frangialli, hitaky ny fanovana ny andron'ny fifidianana. Hatreto tsy mbola nisy firenena namaly an-karihary.
Ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany sy ny mpikambana ao aminy an-jatony dia niantso dekena amin'ny fizotran'ny fifidianana UNWTO. Tsy nisy valiny voarain'ny UNWTO.
Nisy taratasy nalefa tany amin'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana tany New York omaly, ary miandry ny valiny.
Teo no nandefasana ny taratasy tany:
Mpikambana ao amin'ny Executive Executive
IZY Andriamatoa Fuad Naghiyev
Filohan'ny masoivohon'ny fizahan-tany
IZY Andriamatoa Zayed Rashed Alzayani
Minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny fizahan-tany
IZY Andriamatoa Marcelo Álvaro Antônio
Minisitry ny fizahantany
IZY Andriamatoa Carlos Jorge Duarte Santos
Minisitry ny fizahan-tany sy ny fitaterana
IZY Andriamatoa Heping Hu
Minisitry ny Kolontsaina sy ny fizahantany
Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny fizahantany ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina
Ministre du Tourisme et de l'Environnement, mandefitra maharitra amin'ny Développement
IZY Dr. Khaled Ahmed El-Enany
Minisitry ny fizahan-tany sy ny fahagola
Minisiteran'ny Eropa sy ny raharaham-bahiny, ny minisitry ny Frantsa
IZY Andriamatoa Harry Theoharis
IZY Andriamatoa Prahlad Singh Patel
Minisitry ny Firenena momba ny kolontsaina sy ny fizahantany (andraikitra tsy miankina)
Minisiteran'ny fizahantany, governemanta India
Minisitry ny vakoka ara-kolontsaina, fizahan-tany ary asa-tanana ao amin'ny Repoblika Islamika Iran (MCTH)
IZY Andriamatoa Dario Franceschini
Minisitry ny kolontsaina, lova ara-kolotsaina ary fizahan-tany
IZY Andriamatoa Kazuyoshi Akaba
Minisitry ny tany, fotodrafitrasa, fitaterana ary fizahan-tany
Hon. Andriamatoa Najib Balala
Sekreteran'ny kabinetra ho an'ny fizahan-tany sy ny fiainana dia
Ministeran'ny fizahan-tany sy ny fiainana dia
IZY Andriamatoa Rimantas Sinkevičius
Minisitry ny Toekarena sy ny fanavaozana
Minisitry ny tontolo iainana, ala ary fizahan-tany
IZY Ramatoa Claudia Eugenia Cornejo Mohme
Minisitry ny varotra ivelany sy ny fizahantany
IZY Andriamatoa Pedro Siza Vieira
Minisitry ny toekarena, Portugal
IZY Andriamatoa Yangwoo Park
Minisitry ny Kolontsaina, Fanatanjahantena ary fizahan-tany
IZY Andriamatoa Virgil-Daniel Popescu
Ministeran'ny toekarena, angovo ary tontolon'ny orinasa
Ramatoa Zarina Doguzova
Lehiben'ny maso ivoho federaly ho an'ny fizahantany
Agence federaly ho an'ny fizahan-tany an'ny federasiona rosiana
IZY Andriamatoa Ahmed bin Aqil Al Khateeb
IZY Andriamatoa Alioune Sarr Minisitry ny fizahan-tany sy ny fitaterana an'habakabaka
Sekretera an'ny minisiteran'ny kolotsaina, fizahan-tany ary fahagola
Ministeran'ny kolontsaina, fizahan-tany ary fahagola
IZY Andriamatoa Phiphat Ratchakitprakarn
Minisitry ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena
IZY Andriamatoa Mehmet Nuri Ersoy
Minisitry ny tontolo iainana, fizahan-tany ary indostrian'ny fandraisam-bahiny
Tatitry ny tsena Brown Sugar (2020-2029): Famakafakana ny vokatra, ny antontan'isa momba ny tsena ary ny tatitra momba ny tsena | Orinasa Imperial Sugar, Sudzucker AG